Ma ogtahay sababta dadka British-ka u xirtaan ubaxa casaanka ah bisha November?… – Hagaag.com
Ma ogtahay sababta dadka British-ka u xirtaan ubaxa casaanka ah bisha November?…
Posted on 4 Nofeembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waqtigan oo kale sanad kasta waxaa soo noqnoqda aragtida dadka Ingriiska oo xirta ubax casaan ah, iyaga oo ku xirta jaakadaha, labiska haweenka, waxaa xirta dadka caadiga ah ilaa xataa Ra’iisul Wasaarayaasha.
Qaar badan ayaa laga yaabaa in aan ogeyn sheekada ka dambeysa ubaxan casaanka ah oo la caadeystay isticmaalkiisa muddo 97 sano ah.
Bisha November 11-keeda ee sanad kasta ayaa dadka Ingiriiska ay xusaan dhibbanayaasha dagaalyahanada Dagaalkii Dunida ee koowaad. Bilowgii wuxuu ahaa 1921, markii ugu horreysay ee dalka Britain loogu dabaaldego munaasabadda.
Doorashada maalintan ma aheyn mid isku soo boodo oo keliya ah, laakin Dagaalkii Dunida ee koowaad ayaa dhamaaday saacadu markay aheyd 11 maalinta 11aad ee bisha 11aad sanadkii 1918. Dadka rayidka ah ayaa u doortay maalintan si ay ugu xasuustaan ​​kuwa naftooda u huray nabadda iyo xorriyadda.
Maalmihii xigay maalmahaas ee lagu weyneynayey xuskaasi ayaa wasiirkii dagaalka ee Mareykanka uu bilaabay in uu iibiyo ubaxan oo waagii hore ka sameysnaa xariir inta aan warqada noqon, asaga oo ulajeeday in uu u ururiyo dadkii dagaalamay ee hore.
Tan iyo markaas, ololaha lacag ururinta, oo loo yaqaan ‘Poppy Appeal’, ayaa sannad kasta la abaabulaa.
1921 waxay ahayd sannadkii la aasaasay ciidanka qeybta boqortooyada British-ka.